Hupfumi Horamba Huchiparara VaMugabe Vari paNyanga
HARARE — Vanhu vakawanda munyika vanoti havasi kufara nekuondomoka kuri kuramba kuchiita hupfumi hwenyika kubva pakawana nyika kuzvitonga kuzere.
Mumwe wevanhu ava, Amai Sonia Mukurazhizha, avo vanogara mumusha we Budiriro mu Harare, vanoti hupenyu huri kuramba huchivaomera kubva pakawana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980.
Izvi zvinotsinhirwawo naAmai Susan Moyo vanogara ku GlenView vachiti chanyanyonetsa kusawanikwa kwemabasa izvo zvave kupa kuti mhuri yavo ishaye chouviri.
Mumwe mugari wemuHarare, Va Justice Mavedzenge, vanotiwo chave kunetsa ndechekuti huori hwanyanyisa munyika kubva pakawana nyika rusununguko uye vanoti hupfumi hwenyika hunogona kumira zvakanaka kana nyika ikatongwa zvejekerere uye nyaya yehuori ikapedzwa mumapazi ese ehurumende.
Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi re Zimbabwe Congress of Trade Unions, Va Japhet Moyo, vanoti vanhu vari kushanda vave vashoma munyika kubudikidza nekuvharwa kuri kuitwa makambani akawanda zviri kukonzera kuti hupfumi hwenyika huwire pasi.
Mutungamiri wesangano re Zimbabwe Indigenous Economic Empowerment Organization, Va Paddington Japajapa, vanotiwo zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika, Va Robert Mugabe, mudzimai wavo pamwe nemamwe makambani nenyika dzekumavirira ngazvibviswe vachiti izvi ndizvo zvezvimwe zviri kukonzera kuti zvinhu zviwome munyika.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi, Va Masimba Manyanya, avo vaimbova chipangamazano munyaya dzehupfumi mubazi rezvemari, vanotiwo hupfumi hwenyika hwakadonha zvikuru kubudikidza nekupinda kwakaita nyika muhondo yeku Democratic Republic of the Congo muna 1998.
Va Japajapa vari kuurudzira hurumende ye Zanu PF kuti ishande pamwe chete ne MDC vachiti zvinhu zvakanga zvarerukira veruzhinji pakange paine hurumende yemubatanidzwa.
Vanoti zvinhu zvizhinji zvakatanga kuwanikwa muzvitoro pakawumbwa hurumende yemubatanidzwa uye mishonga yakatangawo kuwanikwa muzvipatara panguva iyi.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi vachishanda vakazvimirira, Va Irimayi Mukwishu, vanotiwo chinodikanwa kuti hupfumi wenyika humire zvakanaka kugadzirisa hukama hwe Zimbabawe nenyika dziri mu European Union pamwe nemasangano anopa mari akaita se World Bank ne International Monetary Fund.
Va Manyanya, avo vakabatsira mukunyorwa kwebhuku rinotarisa kudonha kwakaita hupfumi hwe Zimbabwe kubva pakawana nyika kuzvitonga kuzere rinonzi Zimbabwe's Plunge, vanoti kuti hupfumi hwenyika husimukire, hurumende inofanira kuwona kuti mari dzinobuda mukutengeswa kwemangoda nezvimwe zvicherwa yapinda muhomwe yehurumende kwete kuti ipinde muhomwe dzevanhu vashomanana veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Gurukota rezvemari, Va Patrick Chinamasa, vanoti hurumende iri kutsvaga mari inodarika mabhiriyoni makumi mana emadhora yekuti ikwanise kufambisa chirongwa chayo chekuvandudza hupfumi hwenyika che Zimbabwe Agenda for Socio-Economic Transformation kana kuti ZimAsset.
Pari zvino, sekutaura kwaVaChinamasa, hurumende ine chikwereti chekunze chinosvika mabhiriyoni matanhatu nezana rimwe chete remamiriyoni emadhora.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi dzinoti hupfumi hwenyika hwakanyanyodonha pakavambwa chirongwa chekugovera ivhu patsva muna 2000 chakaitwa nehurumende ye Zanu PF icho chinonzi chakakonzera kudzingwa kwevarimi vechichena vaidarika zviuru zvina mumapurazi uye vashandi vavo vakasara vasina mabasa pamwe nepekugara.